Ngwakọta mmeri nke ngwaahịa, nhọrọ, na mmetụta uche | Martech Zone
The Ellylọ nyocha jelii ewepụtala obere akwụkwọ eBook dị etu esi ewepụta Nhọrọ Ngwaahịa. Ebook na-atụnyere omume nke ndị na-azụ ahịa na nnukwu ụlọ ahịa na nke ịntanetị ma na-enye ihe akaebe na omume yiri nke a.
Might nwere ike iche na nnukwu ụlọ ahịa buru oke ibu, mana Jellyvision na-echetara anyị na enwere ohere na-enweghị ngwụcha na webụ, yana otu esi ewetara ngwaahịa na ọrụ gị nwere ike ime ihe dị iche. Ndị a bụ ihe mmụta mụtara (ọdịnaya ekwuru ma kọwaa ya site na eBook):
Ngwaahịa ndị ọzọ, Ndị Ahịa Obi iertọ - Ọ bụrụ n’ịnwale ịnwe saịtị nke masịrị mmadụ niile, ị ga-emepụta ihe na-enweghị onye hụrụ ya n’anya. Mepụta maka ngalaba dị iche iche ka akụkụ nke ọ bụla masị gị. Ghaa ngwa ahia kwesiri ndi ahia. Ihe omuma: Ketchup Conundrum.
Mana… Nhọrọ ndị ọzọ, Ahịa ole na ole - Ọtụtụ nhọrọ na ibe ga-emegharị ndị ọbịa anya ma ha ga-apụ. Nye ha edemede na nzacha ka ha nwee ike zoo ihe ha na-achọghị.
Enweghị Mmetụta, Enweghị Mkpebi - Enweghi mmetụta, ụbụrụ na-enyocha ma na-atụnyere, na-enyocha ma na-atụnyere, na-enyocha ma na-atụnyere na-enweghị iru nkwubi okwu- enweghị obi abụọ. Mmetụta uche bụ ihe na - enyere gị aka ikpebi nhọrọ dị iche iche.
Akwụkwọ eBook na-abanye ọtụtụ nkọwa zuru ezu ma na-ewebata nkwubi okwu niile. Download ya mgbe ị nwetara ohere ma hụ na ị ga - eso blọgụ Jellyvision, Onye Mkparịta ụka.
Steve Jobs: Ka Ha Rie Okwu!
Jul 19, 2010 na 10: 34 AM
N'abụghị onye ofufe nke Ketchup achọtara m Ketchup Conundrum ihe ịtụnanya na-atọ ụtọ. O yiri ka enwere nkuzi banyere ahia na ebe.